Covid-19: mihiboka avokoa ny mpiasan’Ambatovy | NewsMada
Covid-19: mihiboka avokoa ny mpiasan’Ambatovy
Nandalo tao amin’ny orinasa Ambatovy any Toamasina ny minisitry ny Harena an-kibon’ny tany, Ravokatra Fidiniavo, ny alakamisy 14 mey teo. Anton-diany ny nanara-maso ny fanarahan’ity orinasa ity ny toromarika, tsy ahafahan’ny mpiasa mifandray aman’olona, hisorohana ny Coronavirus. Niteraka ahiahy ny mponina any Toamasina mantsy ny nahalalana fa nisy mpiasan’Ambatovy tratran’ity aretina ity.
Nambaran’ny tompon’andraikitra ao amin’ny orinasa, i Philip Beauln, fa efa herinandro maro izao ny mpiasa no nalefa nihiboka, miisa 3 500. Tsy misy afa-tsy 150 amin’ireo sisa, voatery tsy maintsy miasa mampihodina ny orinasa ary tsy mivoaka na mifandray mihitsy amin’ny any ivelany.
Niaraka amin’ny minisitra koa ny governoran’ny faritra Atsinanana, Rafidison Richard Théodore, nanamafy fa tsy tokony hiahiahy intsony ny mponin’i Toamasina, araka ny zavatra hitany sy fantany tao amin’ny orinasa. Tsiahivina fa niisa 598 ny mpiasan’Ambatovy natao fitiliana PCR, nandritra ny fidinan’ny filoha Rajoelina tany an-toerana, ny 7 mey teo. Efa nisotro ny tambavy CVO ihany koa ny mpiasa rehetra.